Maonero paHuawei anogona kupatsanura zvichienderana nekuti unotaura naani. Asi kana paine chikamu chimwe cheHuawei chisingakwanise kuitirwa nharo, ndezvekuti mafoni epamusoro emakambani agara achipa zvimwe zve yakanakisa nhare mbozha Hardware muindastiri. Muchokwadi, yakanaka kesi inogona kuitwa kuti chunk yemazuva ano smartphone kamera maitiro - Periscope zoom lens, vachishandisa yakakura mifananidzo maseru, vachishandisa yakawanda pixel-dense sensor nechinangwa che pixel-binning - yakatanga kuonekwa muHuawei smartphone. Iyo P-yakateerana foni, kuve yakanyanya.
Saka riini Huawei pakupedzisira yakaparura yayo yakawanda-yakanonoka P50 akateedzana Pakutanga masvondo maviri apfuura, pakanga paine kufarira kukuru kubva kumafoni geek, kunyangwe dai vazhinji vedu taiziva kuti foni yaisazotengesa kunze kweChina uye yaisazokwanisa kumhanyisa Google Mobile Services. Isu taida kuona kana mafoni eHuawei P50 angaunza imwechete kamera kuvandudza kwakaunzwa neP20, P30, uye P40.
Ini ndakakwanisa kuyedza chitoro cheyuniti yeHuawei P50 Pro kwezuva nekuda kweHong Kong-based importer Utatu Electronics. Semazuva ese, ini ndakauya ndakashamisika nekwaniso kamera kamera.
Dzvanya kuti uwedzere: Huawei P50 Series Specs
Huawei P50, P50 Pro: Magadzirirwo
X X 158.8 72.8 8.5 mamirimita
6.5-inch OLED FHD +
2700 x 1224 chisarudzo
300Hz kubata kweyenzaniso sampling
1440Hz yakakwira furemu chiyero PWM kudzikira
6.6-inch OLED FHD +
1228 x 2700 chisarudzo
120Hz skrini yekuvandudza mwero
8GB RAM + 128GB / 256GB kuchengetedza
8GB RAM + 128/256 / 512GB kuchengetedza
12GB RAM + 512GB yekuchengetedza
Primary: 50MP f / 1.8, OIS, PDAF
Secondary: 13MP f / 2.2, yakafara-yakafara
Tertiary: 12MP f / 3.4 nhare, OIS
Quaternary: 2MP kudzika
Secondary: 64MP f / 3.5 periscope,
100x digit zoom
Tertiary: 13MP f / 2.2 Ultra-yakafara
Quaternary: 40MP f / 1.6 Monochrome kamera
66W inokurumidza wired kuchaja
50W kurumidza kushaja isina waya
MAKARALI USB 5.2
HarmonyOS 2 (yakavakirwa Android)
Huawei Nhare Nhare (HMS)
HarmonyOS yakavakirwa Android 11
Huawei P50 Pro: Dhizaini uye Hardware
Kunyangwe yaive iyo P20 yakateedzana 'gradient-mavara ekupedzisa, kana Mate 20 akateedzana' ari pakati-akaenzana square kamera module, kana iyo Mate 40's yakatenderera ringi kamera kamera, mafoni eHuawei akawanzo kuve neakasiyana kutaridzika kupfuura gumi nemaviri maChinese Android mafoni akarova musika gore rega. Iyo P50 Pro ndiyo ingangove yakasarudzika (uye inoparadzanisa) Huawei dhizaini izvozvi: maviri mahombe akatenderera kamera mamodule akaiswa akatwasuka akatwasuka kurudyi kuruboshwe.
Mune mawonero angu, dhizaini iyi yaitaridzika kunge garish uye isinganzwisisike mukati Dhinda dhizaini. Asi muchokwadi, foni yaitaridzika zvirinani uye ichirova nenzira yakapenya, ine chivimbo.
Pane iyo Pro modhi, maviri akatenderera zviwi anogara mana makamera - 50MP main camera, 13MP Ultra-wide, 40MP monochrome sensor mudenderedzwa repamusoro, uye imwechete 64MP Periscope kamera pasi pazasi. Iyo selfie kamera yakatenderedza kumberi ndeye 13MP sensor. Ini ndichera zvakadzika mumakamera zvakare pasi muchinyorwa.
P50 Pro yekumberi-parutivi inoratidzira 6.6-inch OLED kuratidza ine 120Hz yekuvandudza mwero uye pasi pehodhi ingave iyo Snapdragon 888 kana Kirin 9000. Chikwata changu chinofambiswa neyekupedzisira.
Pane 8GB ye RAM, 256GB yekuchengetedza mukati, uye 4,360 mAh bhatiri. Iyo quad-yakakomberedzwa skrini uye kumberi-yakatarisana ne3D yakadzika makamera eP40 Pro ese aenda.
Semunhu anowana iyo Galaxy S21 Ultra kana Xiaomi Mi 11 Ultra kuve yakati kurei zvakanyanya, iyo 6.6-inch P50 Pro, ine huremu inowira pasi pe200g, inonyatso gadzikana kubata.
Nhare dzeHuawei P50 ndidzo dzinotanga kutumira neHarmonyOS yekambani kunze kwebhokisi. Muchikamu che "nezvefoni" mune zvigadzikiso, yangu yekutengesa inomhanya paHarmonyOS 2.0. Iko hakuna kutaurwa kweiyo Android vhezheni chero kupi muchikamu, uye neyedu yakaganhurirwa nguva nefoni, isu haina kukwanisa kuongorora hwaro pasi peimwe nzira.
Zvakadaro, HarmonyOS yechikamu chikuru inozvibata uye inotaridzika zvakafanana EMUI, Shanduro yeganda raHuawei yeAroid. Iyo inemavara, yakapfava UI ine akawanda anobatsira software inobata (inonyanya kubatsira yakawanda-tasking dock iyo inokonzereswa nekubata padivi swipe) seinogumburisa bits (isina app dhirowa; iwe unofanirwa kutsvaira kubva pamusoro chaipo pechiso kuti uwane chiziviso mapaneru).
Shanduko huru yekuona ndeyeHarmonyOS 'yekuchengetedza imba inoratidzira mawidgetwi anowirirana ehukuru hwakasiyana hunokwana zvakanaka mukati meiyo gridhi redzimba. Zvinonzwa sekubata kweiyo iOS 14 kwemajeti, kutaura chokwadi. Imwe yakasarudzika uye inobatsira kuwedzera iko kugona kusveta kumusoro kune mazhinji emuno maHuawei maapplication kuvhura mini mini yeiyo app. Semuenzaniso, kutsvaira paApp Photo Gallery kunoratidza mufananidzo wekupedzisira wakatorwa.
Izvo zvinofanirwa kuenda pasina kutaura parizvino kuti mafoni eHuawei P50 haakwanise kumhanyisa Google Mobile Services natively, asi iyo degree rezvirambidzo zvinosiyana kubva kusevhisi kuenda kusevhisi. Mamwe masevhisi eGoogle, senge kushandisa Google Kubhadhara, Google Mubatsiri, uye kurodha mafaera kuGoogle Drive hazvishande paP50 Pro. Asi Google Mepu inomhanya zvakanyanya, kunze kwekunge iwe usingakwanise kupinda muakaunti yako. Zvakadaro, iwe unogona kufamba kubva kunongedzo A kuenda kunongedza B pasina nyaya. Saizvozvo, nepo Gmail neGoogle Calendar maapplication asingashande, unogona kuwana ese masevhisi kuburikidza neyechitatu-bato maapplication senge Microsoft's Outlook. Google Chrome neGboard zvinoshanda zvakare - asi hapana izwi rinodudza pane iyo yekupedzisira. Mamwe ese epasi rese-anoshandiswa anozivikanwa maficha senge Facebook, Twitter, Instagram, uye WhatsApp zvinoshanda zvakanaka.
Pakazara, kana iwe wakashandisa foni yeHuawei mumakore maviri apfuura, HarmonyOS inonzwa uye inoshanda zvakanyanya zvakafanana.
Huawei P50 Pro: Makamera
Iyo Huawei P50 Pro's kamera sisitimu inoona kwete chete yekugadzirisa hardware, asi kunyangwe huzivi. Semuenzaniso, iyo RYYB yekusefa rondedzero yanga iri mainstay muHuawei mireza kubvira 2019's P30 nhepfenyuro yaenda. Zvakare kubviswa iyo pixel-dense 40MP Ultra-yakafara kamera iyo yakaburitsa yakajeka zvinhu pamutengo wemunda-we-maonero renji. Panzvimbo iyoyo, iyo yekupedzisira-yakafara lens mune iyo P50 Pro ndeye yakasarudzika "yakatambanuka, asi kwete seyakajeka" mhando kamera. Kunyangwe iyo Periscope zoom lens yakanyatsodonha pasi kusvika ku3.5x zoom zoom ichienzaniswa ne5x kana 10x Optical zoom mune apfuura maHuawei emireza. Ini ndinoonawo zvichishamisa kuziva kuti yewebsite yeHuawei uye chiziviso chekuburitsa hachina kutaura nezve saizi yekamera yemufananidzo saizi, iyo munguva yakapfuura yanga iri nzvimbo yakasimudzirwa naHuawei.
Iyo Huawei P50 Pro kamera ndeyekuvandudza kwakanaka kupfuura apfuura Huawei kamera
Kunyangwe "kudonhedza" muhuwandu kana ma specs, iyo P50 Pro kamera ndeye kusimudzira pamusoro peiyo yapfuura Huawei makamera munzvimbo zhinji (pamwe kunze kwekuswededza). Zvangu zvichemo zviviri zvakakura nezve zvakapfuura Huawei makamera zvaive zvekuti kudzikiswa kwevhidhiyo kwaive kushoma kana kuchienzaniswa nefoni dzinokwikwidza, uye vachiri kutora mafoto vaiwanzove neakaora yero yeruvara uye nemavara akanyoroveswa (pamwe nekuda kweiyo RYYB rondedzero). Ose akagadziriswa. Iyo huru kamera ikozvino inogadzira punchy, ane hupenyu mavara, uye kune zvakare yakasikwa-inotaridzika bokeh iyo inoparadzanisa nyaya / chinhu kubva kumashure mune ese ari maviri mapikicha nemavhidhiyo. Mifananidzo mina yekupedzisira mune yakatarwa pazasi yaingova auto point-uye-kupfura, kwete portrait mode.
Iko kuvandudzwa kungangoitika nekuda kweHuawei "XD optics", ingango nyowani computational yekutora mifananidzo algorithm yakavakirwa mufoni yemufananidzo chiratidzo yekugadzirisa system iyo Huawei inoti inochengetedza ruzivo rwechifananidzo kupfuura nakare, pamwe nekudzora zvinowanzoitika netsaira kamera kamera senge kuburitsa mwenje uye kukanganisa kwemaziso. .
Uku kuvandudza kunonyanya kuoneka kana kupfura usiku, kana mune yakaoma mamiriro emwenje.
Mune iri pazasi pfuti rakatorwa pasi pemumvuri asi rakatarisana nechiedza chakajeka, ini ndinowana iwo P50 Pro mafoto kuti ave neanosimba akasimba renji uye mavara kupfuura ese ari mairi iPhone 12 Pro uye Galaxy S21 Ultra. Denga reSamsung rakanyanya kuita bhuruu, nzvimbo dzine mumvuri dze iPhone dzakasviba chose.
Iyo yekupedzisira-yakafara lens, sezvakataurwa, yakakura kwazvo kupfuura mana ekupedzisira maHuawei mureza, asi mapfuti haachave akapinza. Kune zvakare musiyano unooneka mukutonhora kwemavara kana iyo yekupedzisira-yakafara pfuti inotariswa padyo nekona kamera kamera.
Sarudzo yeP50 Pro yekudonhedza pasi kune 3.5x Optical zoom pachinzvimbo che5x ingangoita yekuvandudza mifananidzo yekutora mifananidzo, sezvo 3x-3.5x zoom iri inowanzo shandiswa zvakanyanya kureba. Zvinotoshamisa kuti iyo P50 Pro's 10x zoom ichakamira zvakanaka ichipesana neS21 Ultra's optical 10x zoom lens. Ipo pikicha yeSamsung iine ruzivo rwuri nani, ini ndinofarira iwo mavara pane iyo P50 Pro kupfura.
Sezvambotaurwa, ini ndaifunga kuti mafoni emafoni eHuawei 'kugona kwaive kusara kumashure kwete chete iyo iPhone, asiwo Samsung neyeXiaomi vhidhiyo makamera. Ini handisati ndanyatsogadzirira kuti Huawei yatora kutungamira muvhidhiyo (rimwe zuva harina kukwana nguva kuti uwane mhedziso), asi ndinogona kutaura kuti mavhidhiyo eP50 Pro akavandudzwa kupfuura mafoni apfuura eHuawei. Ndiri kunyanya kufadzwa nebokeh kana ndichipfura nekamera kamera, odhiyo inotorwa neiyo mic yemukati yefoni, uye zvakare yekumisikidza kugona uku uchiita firimu.
Huawei P50 Pro: Iyo yakanakisa foni yeHuawei izvozvi, kunyangwe zvese
Mamwe maabhudhi akasarudzika andakawana panguva yangu angaita maawa masere ekuyedzwa: iyo P50 Pro's haptics yakavandudzwa kupfuura yapfuura mushy, isina simba Huawei haptics. Izvo hazvisati iri padanho reSamsung kana Xiaomi's, asi kudedera kubva kumakomba makuru kwakanyatso kujeka uye kwakanyatsojeka izvozvi. Iyo P50 Pro zvakare inounza maspika stereo, kugadzirisa kumwe kutadza kweakamberi Huawei mireza.
Hupenyu hwebhatiri, zvisinei, hunondisiya ndichida. Iyo 4,360 mAh cell ingori padivi diki nemazuvano emireza mireza, uye iyo 120Hz skrini inodya simba. Kubva pane yangu inobvumidzwa inorema yekuyedza yekuyedza kamera uye mashandiro, foni yanga ichidhonzera pamusoro pe10% bhatiri paawa. Iko kune zvakadaro 66W inokurumidza kuchaja zvidhinha mubhokisi.
Huawei P50 Pro XDA Foramu
Pakupedzisira, iyo P50 Pro inonyanya kutengesa nzvimbo iri, senge yapfuura mireza yeHuawei, makamera uye yakasarudzika dhizaini inomira kunze kwegungwa remafoni emafoni mumigwagwa. Asi iyo software mamiriro ayo akanganisa Huawei mafoni 'kukwidza kwepasirese kunoramba kuri kwechokwadi pano. Iyo equation inoshanduka zvachose kana uye kana iyo software mamiriro ikajeka, nekukurumidza ichidzosera Huawei mukukakavadzana pakati penzvimbo yepasirese heavyweights. Kusvika panguva iyoyo, isu tinongokoshesa iyo Hardware, nekuti iyo Huawei P50 Pro ichiri yakanakisa foni yeHuawei izvozvi.
The post Huawei P50 Pro Hands-on: Akanaka makamera sekutarisirwa, asi HarmonyOS haina kuchinja zvakawanda yakatanga kutanga xda-vatadzi.